အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: ဘုရားသုံးဆူက ခဲ(lead)
ခဲဆိပ်သင့်မည်ကို ဘုရားသုံးဆူဒေသခံများစိုးရိမ်ဆိုသောသတင်းအပေါ် အထင်မှားအမြင်မှား မဖြစ်စေရန် မိမိ၏ လေ့လာချက်များအရ အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြလိုပါသည်။
အဆိုပါဒေသတွင် စုပုံထားသောသတ္တုအိတ်များမှာ ခဲ (Lead) မဟုတ်ပါ။ ခနောက်စိမ်း (Antimony) သာဖြစ်ပါသည်။ ဒေသအခေါ်အဝေါ်အရ ထွက်ရှိသောသတ္တုများကို ခြုံငုံ၍ (ဂဲ) ခဲဟု ခေါ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသအခေါ်နှင့် ဓာတုဗေဒအခေါ်အဝေါ် ရောထွေးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခနောက်စိမ်းသတ္တုများကို ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံအ၀ှန်း စုပုံ၍ တရုတ်ပြည်သို့ ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းမှ ရောင်းချကြရာ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်ညစ်ညမ်းခြင်း ကန့်ကွက်ချက်များ လုံးဝမရှိပါ။
သဗြုကုမ္ပဏီမှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သော သန့်စင်စက်မှာ ခနောက်စိမ်းသန့်စင်စက်သာဖြစ်ပါသည်။ သတ္တု ပါဝင်နှုန်း ၂၀% အောက်လျော့နည်းသောခနောက်စိမ်းသတ္တုရိုင်းများကို ဆင့်တက်မြှင့်တင်ရန် Roasting Plant ကိုအသုံးပြုသည်မှာ နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသောနည်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့သွားရခြင်းမှာ သတ္တုတွင်းနှင့် သန့်စင်စက်သည် မိုင် (၄၀) ကျော်ဝေးပါသည်။ သတ္တုပါဝင်မှုက ၂၀% အောက်လျော့နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်နှင့် ရသည့်အကျိုးအမြတ် မကိုက်သောကြောင့် စီးပွားရေးရှုထောင့်မှ ကြည့်၍ စက်ရုံကို သတ္တုတွင်းရှိရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်အာဏာပိုင်ကမျှ ပိတ်ရန်ညွှန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ခနောက်စိမ်းသတ္တု သန့်စင်စက်ရုံကို ကလောမြို့၌တည်ဆောက်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်ထိ မည်သည့်ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ မရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
စက်ရုံမှထွက်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ငါးများသေသည်ဆိုသည်မှာ အခြေအမြစ်မရှိပါ။
ထိုစဉ်က ငါးများသေသည်ဆို၍ ခနောက်စိမ်းများ ရေထဲထည့်၍ ငါးလွှတ်ကာ သက်ဆိုင်ရာနှင့် မြို့လူထုသို့ လက်တွေ့စမ်းသပ် ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။ (ဤစတစ်ဗနိုက် ခေါ် အန်တီမိုနီသတ္တုရိုင်း အမဲကို ရှေးအခါက အမျိုးသမီးများသည် မျက်ခုံးနှင့် မျက်တောင်ဆိုးဆေးပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုခဲ့လေသည်။ အန်တီမိုနီအနီကို နီလင်သောဆီဆေးနှင့် အရောင်ဆေးများအပြင် မီးခြစ်နှင့် မီးရှူးမီးပန်းများပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလျှက် ရှိကြသည်။) ဟုပင် ၀ီကီမြန်မာတွင် ရေးသားထားပါသည်။ Antimony သတ္တုရိုင်းမှထွက်ရှိသော သတ္တုများကို အမေရိကန်ကျောင်းများ၌ကလေးများဝတ်ဆင်ရန် မီးခံအင်္ကျီ၊ အမျိုးသမီးမျက်တောင်ဆိုးဆေး၊ အိမ်သုတ်ဆေးများနှင့် ကြွေထည်၊ဖန်ထည်လုပ်ငန်းများ စသည်တို့တွင် အဓိက အသုံးပြုသဖြင့် လူများကိုလုံးဝအန္တရာယ် မပြုနိုင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောခနောက်စိမ်းတွင် ခဲ (Lead) ပါဝင်မှုမှာ ၁% အောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြဒါးပါဝင်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးဝအန္တရာယ်မရှိသောသတ္တုဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းမဖြစ်စေရန် ရေးသားဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
posted by အတ္တ @ May 06, 2011 1 Comments
At May 6, 2011 at 8:03 PM , Anonymous said...
"Antimony and many of its compounds are toxic, and the effects of antimony poisoning are similar to arsenic poisoning. Inhalation of antimony dust is harmful and in certain cases may be fatal; in small doses, antimony causes headaches, dizziness, and depression. Larger doses such as prolonged skin contact may cause dermatitis; otherwise it can damage the kidneys and the liver, causing violent and frequent vomiting, and will lead to death inafew days."
It is stated in Wikipedia.